एसियन कपमा छनोटमा नेपालको सम्भावना कस्तो? | Hamro Khelkud
एसियन कपमा छनोटमा नेपालको सम्भावना कस्तो?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – एएफसी एसियन कप २०१९को छनोट चरण अन्तर्गत मंगलबार भएको खेलमा नेपाल र यमनले गोलरहित बराबरी खेले। पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग ४-१ले पराजित भएको नेपालले यस बराबरीसँगै छनोटमा अंकको खाता पनि खोल्यो।
समूह चरणमा शीर्ष २ स्थानमा रहने टोलीले २०१९मा संयुक्त राज्य इमिरेट्समा हुने एएफसी एसियन कपमा सहभागिता जनाउन पाउने प्रावधान रहेको छ। समूह ‘एफ’मा फिलिपिन्स, यमन र ताजिकिस्तानसँग रहेको नेपाल २ चरणको खेल समाप्त हुँदा १ अंकसहित तेश्रो स्थानमा छ। शीर्ष स्थानमा २ खेल जित्दै ६ अंक जोडेको फिलिपिन्स छ भने दोश्रो स्थानमा ४ अंक बोकेको यमन रहेको छ। दुवै खेलमा पराजित भएको ताजिकिस्तानले अहिलेसम्म खाता खोलेको छैन र तालिकाको पुछारमा रहेको छ।
४ खेल खेल्न बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालले अब अर्को खेल सेप्टेम्बर ५ तारिखमा ताजिकिस्तानसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। सम्भवत: उक्त खेल पनि हलचोक स्थित एपीएफ रंगशालामा खेलिने सम्भावना बढ्दो छ। नेपालले त्यसपछि सोहि टोलीसँग अक्टोबर १० तारिखमा ताजिकिस्तान पुगेर चौथो खेल खेल्नेछ।
नोभेम्बर १४मा फिलिपिन्सलाई घरेलु मैदानमा निम्त्याउने नेपालले समूहको अन्तिम खेल यमनसँग खेल्नेछ। यमनसँगको खेल भने कतारको दोहामा हुने भएको छ। उक्त खेल सन २०१९को मार्च २७ तारिखका दिन हुनेछ।
समूहको अंक तालिकाको शीर्ष २ स्थानमा रहन सकेको खण्डमा नेपाल पहिलो पटक एसियन कपको लागि छनोट हुनेछ।